DHEGEYSO-Wasiirka gaashaandhiga oo khudbad u jeediyey bulshada Caabudwaaq. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Wasiirka gaashaandhiga oo khudbad u jeediyey bulshada Caabudwaaq.
Luulyo 21, 2016 11:34 g 0
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Sh Cali Diini iyo masuuliyiin kale oo dawladda dhexe ah ayaa kulamo cWaaq kula yeeshay maamulka degmada iyo qaybaha bulshada kadib markii shalay ay yimaadeen halkasi.
Kulamadaasi ayaa salka ku haya xaaladaha degmada, deegaannada hoos yimaada iyo guud ahaanba gobolkaasi Galgaduud, gaara ahaan amniga, iyo hormarinta, iyadoo sidoo kalena qorshaha lagu darayo kulamada in ay ku jirto arrinka doorashada iyo xildhibaannada labada aqal ee xulistooda lagu jiro.
Wasiirka gaashaandhigga Cabdiqaadir Sh Cali Diini oo warbaahinta kula hadlay cWaaq markii ay yimaadeen isaga iyo waftigiisu ayaa sidaan macneeyey ujeeddada safarkiisu daarran yahay.
Madaxweynaha oo ammaanay ciidanka kumaandoosta Soomaaliyeed.